Izindaba - Ukuqoqwa kanye nokuthuthwa kwegesi ye-oilfield
I-Natural Gas Conditioning
I-Evaporation Crystallization Skid
I-Tail Gas Treatment Skid
I-NGL Recovery Unit
Iyunithi Yokukhiqiza I-Hydrogen
Isethi Yejeneretha Yegesi
Ukuqoqwa nokuthuthwa kwegesi yase-oilfield
Igesi yenkundla kawoyela (okungukuthi igesi engahluziwe ehambisana nowoyela ongahluziwe) ubunjiniyela besistimu yokuthuthwa ngokuvamile buhlanganisa: ukuqoqwa kwegesi, ukucutshungulwa kwegesi; Ukuthuthwa kwegesi eyomile kanye ne-hydrocarbon elula; Ukuthuthwa okuvaliwe kukawoyela ongahluziwe, ukuzinza kukawoyela ongahluziwe, ukugcinwa kwe-hydrocarbon ekhanyayo, njll.
Ukuqoqwa kwegesi yenkundla kawoyela
Ngemuva kokuthi uwoyela ongahluziwe uphuma emthonjeni wamafutha futhi ulinganiswa yisihlukanisi semitha, uwoyela negesi kuhanjiswa kusihlukanisi samafutha negesi esiteshini sokudlulisa uwoyela. Igesi yase-Oilfield ihlukaniswa kuwoyela ongahluziwe futhi ingena kunethiwekhi yokuqoqa igesi. Ngokuvamile, isikhungo sokuqoqa igesi esizicindezelayo noma esikhuthazayo sakhiwa esiteshini esihlanganisiwe sesikhungo sokukhiqiza uwoyela. I-Booster compressor iningi lamayunithi amaningi aphindaphindayo esiteji esisodwa. Ingcindezi yokungena ingantanta, futhi ingcindezi yokuphuma incike ekucindezelweni kwesistimu emuva. Ingcindezi yokuphuma ephezulu ingu-0.4MPa.
Kuvaliwe ukuqoqwa nokuthuthwa kukawoyela ongahluziwe
Ukuqoqwa nokuthuthwa kukawoyela ongahluziwe kuyisimo esiyinhloko sokukhipha i-hydrocarbon encane kuwoyela ongahluziwe ngendlela yokusimamisa uwoyela ongahluziwe, futhi kungenye yezinyathelo ezibalulekile zokunciphisa ukulahleka kukawoyela ongahluziwe.
Esiteshini sokudlulisa uwoyela, uwoyela ongahluziwe odlula kusihlukanisi segesi kawoyela ungena endaweni yokuhlubula amanzi mahhala, bese uthunyelwa esiteshini sokuqeda uwoyela ongahluziwe ngokusebenzisa ithange eligcina amanzi kanye nesithando sokushisa esithumela ngaphandle. Lapha, uwoyela ongahluziwe udlula kwisikhiphi samanzi samahhala, bese ungena esithandweni sokushisa sokuphelelwa amanzi emzimbeni ukuze ushise, bese ungena ku-dehydrator kagesi eyinhlanganisela. Ngemva kokuphelelwa amanzi emzimbeni, uwoyela ongahluziwe ungena ethangini le-buffer (umthamo wamanzi kawoyela ongahluziwe ungaphansi kuka-0.5%), bese uphonswa kuyunithi yokuqinisa uwoyela ongahluziwe, futhi ngemva kokusimamisa, uwoyela ongahluziwe ungena ethangini lokugcina ukuze uthunyelwe ngaphandle.
Enqubweni evaliwe yesiteshi sokudlulisa uwoyela kanye nesiteshi sokuqeda amanzi emzimbeni, amanzi amahhala akhishwa kusenesikhathi futhi axutshwe emanzini omjovo wendawo kawoyela endaweni ukuze kuncishiswe ukusetshenziswa kwamandla okukhiqiza.
Ukucutshungulwa kwegesi yase-oilfield
Igesi yasezindaweni zikawoyela evela esiteshini esizicindezelayo ingena kuyunithi yokupholisa engashoni (noma i-cryogenic), lapho icindezelwa, iqandiswe futhi ihlukaniswe kanye negesi engacondensable kusukela kuyunithi yokuqinisa uwoyela ongahluziwe ukuze kubuyiselwe izingxenye ezingaphezu kwe-C3 (noma i-C2) , futhi igesi eyomile ithunyelwa kwamanye amazwe.
Ukuqoqa i-hydrocarbon elula kanye nesistimu yokuthutha
Ukuqoqa nokuthuthwa kwe-hydrocarbon ekhanyayo kusebenzisa imodi yokuthutha yamapayipi, futhi uhlelo lwakhiwe indawo yokugcina eyisizayo, isiteshi sokudlulisa, ukugcinwa okujwayelekile, isiteshi sokulinganisa amamitha okuthekelisa kanye nenethiwekhi yamapayipi ehambisanayo.
I iyunithi yokutakula i-hydrocarbon elulaifakwe ithange lokugcina, elisetshenziselwa ukuphelelwa amanzi emzimbeni, ukuvumelanisa umkhiqizo, isivikelo sephampu yokuthekelisa kanye nepayipi lokuthekelisa ukuze kuqinisekiswe ukukhiqizwa okuvamile noma ukuvalwa okuhleliwe kweyunithi uma kwenzeka ingozi. Amandla okugcina ithangi eligcinayo ngokuvamile ayizinsuku ezi-1 kuya kwezi-2 zokukhiqiza i-hydrocarbon elula.
Umsebenzi oyinhloko wedepho yokudlulisa i-hydrocarbon ekhanyayo ukusebenzisa idepho ukuxhumanisa ukungalingani phakathi kokukhiqizwa kwe-hydrocarbon elula kanye nokuthekelisa ngosuku olulodwa, kanye nokugcina nokuhlanza ukugeleza kwamapayipi uma kwenzeka ingozi yepayipi.
Umsebenzi oyinhloko wesitoreji esivamile se-hydrocarbon esikhanyayo ukusebenzisa ithangi lokugcina ukuxhumanisa ukungalingani phakathi kokukhiqizwa kwe-hydrocarbon ukukhanya nokuthekelisa, okuhlanganisa nokuguquguquka kokuphumayo kweyunithi yokukhiqiza, ukuguquguquka kokuphumayo okubangelwa izinkathi zokunakekela ezihlukene zeyunithi, isitshalo se-ethylene. ukunakekelwa ngaphandle kokugcinwa kwe-ammonia, futhi insimu kawoyela idinga ukuqhubeka nokuhlinzeka ngokugcinwa kwe-hydrocarbon ekhanyayo etholwe kugesi yokuphakelayo.
Isitoreji esijwayelekile se-hydrocarbon esilula kanye nesiteshi semitha sokuthekelisa esiphelele yizindawo eziyinhloko zokuphuma kwezinto ezibonakalayo ze-hydrocarbon eziwuketshezi ezinikezwe insimu kawoyela yesitshalo se-ethylene, indawo yokuhlangana ye-hydrocarbon ekhanyayo ekhiqizwe amayunithi ahlukahlukene wokukhanya we-hydrocarbon, kanye nesizinda sokugcina i-hydrocarbon elula kanye nohlelo lokuthutha. .
Thekelisa futhi ubuyisele uhlelo lwegesi eyomile
Igesi yasensimini kawoyela iyaphathwa futhi icutshungulwe ngemuva kokululama. Iningi legesi eyomile ngemva kokutholwa kwe-hydrocarbon ekhanyayo ithunyelwa ezitshalweni ze-Dahua ne-methanol njengezinto zokusetshenziswa zamakhemikhali, futhi ingxenye yegesi eyomile ibuyiselwa esiteshini sokudlulisa uwoyela endaweni kawoyela njengophethiloli wokushisa isithando somlilo kanye ne-boiler. Ukubuya kwegesi eyomile kuyinqubo ehlehlayo yokuqoqwa kwegesi. Ngesikhathi esifanayo, enye igesi eyomile ifakwa endaweni yokugcina igesi ehlobo. Ikhiqizwa ebusika ukuze kudambise ukushoda kwegesi yemvelo kanye nesidingo.
Enye igesi eyomile isetshenziselwa ukuphehla ugesi negesi kubahlali.
Isikhathi sokuthumela: Jun-21-2021
No. 8, Isigaba 2 somgwaqo i-Tengfei, IsiFunda esincane sase-Shigao, Indawo Entsha yase-Tianfu, idolobha lase-Meishan, i-Sichuan China 620564
Inhloso yokwelashwa kwangaphambili kwesitshalo se-LNG
Amaphrojekthi ethu amakhulu esayensi nobuchwepheshe aphumelele ukuhlolwa kokusebenza kwamaphakathi nethemu